Kooxda iskudubbaridda Koronaha ayaa go’aamisay in loogu gudbo si xadeysan oo ay ku jirto kalafogaansho caafimaad waxbarashada dhaw, ee goobaha waxbarashada heerka labaad, intii horay loo xadeeyay waxay u soconayaan sideedii hore illaa bisha maarso | City of Helsinki
Kooxda iskudubbaridda Koronaha ayaa go’aamisay in loogu gudbo si xadeysan oo ay ku jirto kalafogaansho caafimaad waxbarashada dhaw, ee goobaha waxbarashada heerka labaad, intii horay loo xadeeyay waxay u soconayaan sideedii hore illaa bisha maarso
Kooxda iskudubbaridda Koronaha ee Aagga caasimadda ayaa shirkeedi 18.2.2021 ku go’aamisay, in ay sii socdaan xadaymaha iyo soo jeedinnada hadda shaqaynaya inta badan aagga caasimadda illaa iyo dhammaadka maarso 2021. Waxaa loo diyaargaroobayaa in la qaato ugu yaraan qodobka sharciga ah ee cudurrada la kala qaado tirsigiisa 58 d intaa waxaa dheer oo ay magaalo madaxda iyo degmooyinka ku ay go’aamiyeen , in si xadeysan oo ay ku jirto kalafogaan sho caafimaad waxbarashada dhaw, aadista goobaha waxbarashada heerka labaad, go’aankan ku noqoshada waxbarashada si joogto ah ayaa qiimeynayaa si dhaqsiyo ahna wax looga bedelayaa hadduu qasbo qodobka sharciga ah ee cudurrada la kala qaado.
U gudubka waxbarashada dhaw sida xadeysan ee agagaarka
Waxbarashada bannaanka lagu qaadanayo ee heerka labaad waxay socotay ku dhawaad sannad. Kooxda iskudubbaridda Koronaha waxay aqoonsan yihiin, in carruurta iyo dhallinyaradu ay xiisadda Koronaha darteed yihiin kuwa nugul oo ay tahay in a lagu dadaalo nololwanaaggood. Xirnaanshaha waxqabadka hiwaayadda ee wakhtiga dheer qaadatay waxaa ka dhalatay saamayn xun oo soo gaartay nololwanaagga carruurta iyo dhallinyarada waliba ardayda kuwa horay ugu baahnaa in waxbarashada laga caawiyo.
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa waxay go’aamiyeen, in loo gudbo waxbarashada dhaw oo la xadeeyay 1.3.2021 iyadoo ugu badnaan bar ardayda dugsiyada sare 1 iyo 2.aad ay imaanayaan tookadooda waxbarashada dugsiyada. Kooxaha waxbarashada oo la xadeeyo, si loo ilaaliyo ammaanka kala fogaashaha, dugisyada sare waxay ka warhaynayaan qabanqaabada waxbaridda ayadoo lagu dhaqmayo talasiinta ammaanka caafimaadka si ay ugu imaan ardayda qaarkood muddo dheer qeybaha waxbarashada bannaanka lagu qaato.
Dhammaan ardayda ka qeybgaleysa qalinjabinta dugsiyada sare waxay u wareegayaan waxbarashada bannaanka lagu qaato laga billaabo 1.3.2021 si loo ilaaliyo ammanka ka qalinjabinta dugsiga sare. waana ardayda tusaale ahaan ardaydayda galaya maaddooyinka qaarka lagu lahaa iyo kuwa labaadyada, kuwaas oo billaabaya qalinjabinta.
Waxbarashada xirfadaha waxay u wareegayaan waxbarasho loo qabanqaabiyay sidan, saddex meelood meel kooxaha waxbarashada ama ardayda goobaha ayaa markooda imanaya goobaha waxbarashada si macaahidda ay u noqdaan kuwo ku filan si loo dhowro kala fogaashaha.Waxbarashada xirfadaha waa muhiim in la qiimeeyaa kala qaybsanaashaha da’da ardayda si loo dhaqan geliyo ammaanka kala fogaanshaha. waxbarashada bannaanka lagu qaatoiyo tan macaahidda waxaa loo tookeysanayaa sida ya u qabanqaabiyaan kooxaha waxbarasha iyo goobaha. Qaar ka mid ah ardayda waxay ku bartaan tababar shaqo (heshiis waxbarid- ama heshiis tababar shaqo), taas oo loogu dhaqmaayo hagidda ammaanka caafimaad ee shaqosiiyha.
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa, iyo Kauniainen oo la soconeysa sida loogu gudbayayo waxbarashada ka baxeysa iskuullada.
Sii wadidda xadaymaha iyo soo jeedisyada hadda jira oo aan weli laga noqon
Xadaymaha iyo soojeedinnada ee horay u soo jeediyeen kooxda iskudubbaridka Koronuhu ee ku saabsan munaasabadaha dadweynaha, munaasabadaha gaarka ah, isticmaalka goobaha dadweynaha iyo shaqada bannanka ayaa sii shaqaynaya illaa iyo 31.3.2021. Xadeymaha iyo soo jeedinnada hadda ji sii wadideeda waxaa looga hortagayaa faafidda caabuqa noociisa cusub iyo culeyska ku iman kara hay’adda caafimaadka iyo arrimaha bulshada. sidoo kale waxaa la soo jeedinayaa isticmaalka af-shareerka inta weyn 12-jirka. soo jeedinnada iyo xadeynnada ku meel gaarka ah waa la sii wadayaa haddii loo baahdo.
Intaa waxaa dheer kooxda isku dubaridka koronaha waxay ku raacday THL iyo HUS soo jeedinnada ay soo jeediyeen, sida waaxda maamulka Gobolka Koonfurta Finland in ay go’aamiso sida ugu dhaqsiyaha badan xadeynta isku imaashaha in ka badan lix qof iyo in aan la qaban muddo bil ah shirar iyo kulanno guud. kulannada ugu badnaan lix qof waxaa la qaban karaa keliya haddii ay tahay lagama maarmaan, sida shiarar sannaddedka jaaliyadaha iyo shirkadaha, kuwaasna waa inay ka faa’ideystaan qadka isgaarsiinta mar kasta ay macquul tahay.
U diyaargarowga qaadashada sharciga cusub ee cudurrada faafa iyo awoodda uu siinayo
Kooxda iskudubbaridka koronaha ee Aagga waxay u diyaargaroobayaan qaadashada sharciga cusub ee cudurrada faafa awoodda uu siinayo ugu yaraan qodobka 58 d tirsigiisa. tirsiga wuxuu waajibinayaa goobaha furan ama kuwa xadeysan ama ku sugidda ka qeybgalayaasha loogu talagaly,sida kala dhowrsanaashaha ka qeybgalayaasha.Hogaanka wuxuu gutay waajibaadkiisa markuu xadeeyo ka qeybgalayaasha, goobaha tirda macaamiisha ama qabanqaabin qaab waxqabadka oo loo foojgnaado. Go’aanka wuxuu si ballaaran u quseyn karaa goobaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ahba, oo aan lagu darin maqaayadaha. Kooxda iskudubbaridka Koronaha waxay ku boorinayaan goobaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay in ay u diyaargaroobaan qaadashada xadeynta. Go’aanka arrinkan waxaa sameynaya waaxda maalmulka ama degmooyinka agagagaarradooda markuu sharcigan dhaqan galo.
Kooxda iskudubbaridka Koronaha waxay la soconayaan xaaladda caabuqa haddii ay xaaladdu is bedesho kooxdu waa u diyaar in ay qiimeeyaan mar kale go’aannada la gaaray si dhaqsiyo ah.
Kooxda iskudubbaridda Koronaha go’aannada horay u gaartay iyo kuwa Bisha maarso dhammaadkeeda soconayo ee Xadaymayaha iyo soojeedinnada.
Kooxda iskudubbaridka koronaha xadeynadii iyo soo jeedinnadii ee hore goobaha dowliga ah iyo bannaan ka shaqeynta waxay soconayaan illaa 31.3.2021, wxaa lagagu sameeyay qiimeynta quburada caabuqa iyo qiimeynta guud ayadoo la isticmaalayo. Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa, iyo Kauniainen oo la soconeysaa go’aannada xadeymaha iyo soo jeedinnada.
Xadeynada iyo soo jeedintan waxay soconeysaa illaa 31.3.2021
Dhammaan goobaha macaamiisha ee dadweynaha u furan, marka laga reebo tookooyinka hiwaayadaha carruurta iyo dhallinyradu weli waa ay xiranyihiin. Tan waxaa loola jeedaa tusaale ahaan dhammaan guryaha dhaqanka, madxafyada iyo guryaha dhallinyarada ee magaalada. Waxqabadka machadyada aqoonkororsiga waa la hakiyay.
Waxqabadka hiwaayadaha dadka waaweyn weli laguma qabanqaabinayo gudaha iyo bannaanada goobaha ay maamulaan degmooyinka. Waliba waxaa la soo jeedinayaa waxqabadka hiwaayadaha ay kuwa madaxa baannaan ay hakiyaan.
Kooxda iskudubbaridda weli waxay soo jeedineysaa weliba si adag xadeynta, isticmaalka goobaha jimicsiga iyo waqtiyada firaaqada.
Shaqada lagu qabto meelaha ka bannaan ee goobaha shaqada
Kooxda iskudubbaridda waxay soo jeedinayaan weli in ay shaqosiiyayaasha u qabanqaabiyaan shaqaalaha shaqo ka bannaan goobaha shaqada, shaqooyinka ugu macquulsan, Haddii ay macquul ahayn waxaa la soo jeedinayaa in shaqasiiyaha uu hago shaqaalaha in ay isticmaalaan af-shareerka dhammaan goobaha shaqada, waliba ayaa ay macquul atahay kala fogaashaha. goobta shaqada waqtiyada cunnada iyo qaxwaha waa in la kala tookeystaa.
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa, THL, HUS iyo waaxda maamulka Gobolka Koonfurta Finland ayaa waxaa 10 Sebteembar 2020 aasaaseen kooxda iskudubbaridda Koronaha ee Aagga caasimadda. Hiigsiga kooxdan dabbaqaysa nidaam hawleedka aaga ku salaysan ee Wasaaradda sooshalka iyo caafimaadku waa xoojinka sawirka xaaladda iyo iskudubarididda iyo diyaarinta waxqabad deegaanka iyo kuwa maxalliga ah.
Kooxdan oo ka kooban hoggaan sare waxay qaabilsantahay diyaarinta iyo iskudubbarididda go’aaminta ku salaysan sawirka xaaladda ee mideysan. Go’aannada waxaa awooddiisa sharciga ku gaaraya hawl-wadeen kasta. Kooxdu waxay xoojinaysaa wadashaqaynti ka socotay wakhtiga Koronaha oo dhan aagga caasimadda
Sooshalka iyo caafimaadku waa xoojinka sawirka xaaladda iyo iskudubarididda iyo diyaarinta waxqabaduada deegaanka iyo kuwa maxalliga ah.